Tomorrow Never Dies (1997) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 6.5/10 180951 votes
Desmond Llewelyn, Götz Otto, Jonathan Pryce, Judi Dench, Michelle Yeoh, Pierce Brosnan, Ricky Jay, Samantha Bond, Teri Hatcher, Vincent Schiavelli
ဒီ ဇာတျကားကတော့ မငျးသား Pierce Brosnan ရဲ့ ဒုတိယမွောကျဘှနျးဇာတျကားဖွဈပါတယျ..
Pierce Brosnan ရဲ့ဘှနျးဇာတျကောငျကို ပရိတျသတျတျောတျောမြားမြားနှဈသကျကွောငျးတှရေ့ပါတယျ…
Pierce Brosnan နဲ့ ဘှနျးကို တဈထပျတညျးကိုကျညီစတေဲ့ ရသကို ပေးစှမျးနိုငျခဲ့တာပါ….
နောကျတဈခကျြက သူ့ရဲ့ဇာတျကားတှမှော Action ပိုငျး အတျောလေး ပွညျ့စုံတာကို တှရေ့မှာပါ..
ဒီဇာတျကားမှာတော့ အရှတေို့ငျးရဲ့ နာမညျကြျော မငျးသမီး မီရှဲယိုလဲပါဝငျထားပါတယျ…
IMDb Rating (6.5/10) ရရှိထားပါတယျ…။
ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Kaung Myat Hein ဖွဈပါတယျ
ဒီ ဇာတ်ကားကတော့ မင်းသား Pierce Brosnan ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဘွန်းဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်..
Pierce Brosnan ရဲ့ဘွန်းဇာတ်ကောင်ကို ပရိတ်သတ်တော်တော်များများနှစ်သက်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်…
Pierce Brosnan နဲ့ ဘွန်းကို တစ်ထပ်တည်းကိုက်ညီစေတဲ့ ရသကို ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တာပါ….
နောက်တစ်ချက်က သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာ Action ပိုင်း အတော်လေး ပြည့်စုံတာကို တွေ့ရမှာပါ..
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အရှေ့တိုင်းရဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသမီး မီရှဲယိုလဲပါဝင်ထားပါတယ်…
IMDb Rating (6.5/10) ရရှိထားပါတယ်…။
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Kaung Myat Hein ဖြစ်ပါတယ်
Desmond Llewelyn Götz Otto Jonathan Pryce Judi Dench Michelle Yeoh Pierce Brosnan Ricky Jay Samantha Bond Teri Hatcher Vincent Schiavelli
Al Matthews Andrew Hawkins Anja Jensen Anthony Green Antje Schmidt Brendan Coyle Bruce Alexander Cecilie Thomsen Christopher Bowen Colin Salmon Colin Stinton Daphne Deckers Desmond Llewelyn Dinny Powell Dominic Shaun Geoffrey Palmer Gerard Butler Götz Otto Hugh Bonneville Jason Watkins Joe Don Baker Jonathan Pryce Judi Dench Julian Fellowes Julian Rhind-Tutt Laura Brattan Liza Ross Mark Spalding Michael Byrne Michelle Yeoh Nadia Cameron-Blakey Nina Young Pierce Brosnan Pip Torrens Ricky Jay Romo Gorrara Samantha Bond Sherry Stone Sophie Schütt Terence Rigby Teri Hatcher Vincent Schiavelli Vincent Wang
Option 1 server.mfile.cloud 566 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 566 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 566 MB SD (480p)
Option4storage.msubmovie.com 566 MB SD (480p)
Option5storage.msubmovie.com 1.4 GB HD (1080p)
Option6server.mfile.cloud 1.4 GB HD (1080p)
Option7sharer.pw 1.4 GB HD (1080p)
Option 8 yuudrive.me 1.4 GB HD (1080p)
Option9storage.msubmovie.com 4.2 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 10 sharer.pw 4.2 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 11 yuudrive.me 4.2 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option 12 server.mfile.cloud 4.2 GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1